Fambolen-kazo niarahan’ny fianakaviamben’ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny
Notanterahana ny 29 janoary ny fambolen-kazo niarahan’ny fianakaviamben’ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny, izay notarihin’ny Minisitra, Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba A.S. Oliva, ary niarahana tamin’ny solontenan’ireo masoivoho sy fikambanana iraisam-pirenanana miasa eto Madagasikara. Zana-kazo na akasia, voandelaka ary zakarandà miisa 2500 no novolena teny amin’ny Kaominina ambanivohitra Ambatomirahavavy tamin’ity androany ity.
Mandray anjara feno, araka izany, amin’ny fanatanterahina ny veliranon’ny Filoham-pirenena, Andriamatoa Andry RAJOELINA, ho amin’ny famerenana an’i Madagasikara ho rakotra ala ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny.
Ny fambolen-kazo dia adidy tanterahin’ny olom-pirenena rehetra ho fifampitsinjovana eo amin’ny samy mpiara-monina sy ho fiantohana sahady ny fiainan’ireo taranaka hoavy rehetra mba hisitrahan’izy ireo tontolo iainana madio sy mirindra. Noho izay fitsinjovana ny taranaka izay dia nanolotra dabilio miisa 15 ho an’ny EPP Andriantompoiray-Ambatomirahavavy ihany koa ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny.